Iyo Apple Watch Series 4 inogona kunge iri "shanduko" maererano naJony Ive | Ndinobva mac
Jony Ive Nhasi iye ndiye Apple Dhizaina Dhizaina, asi ye rake basa munhu ane simba kwazvo muApple, kwete mukugadzirwa kwezvigadzirwa chete, asiwo mukuita sarudzo kwekambani.
Zvine musoro, kambani yakaita seApple inofanirwa kuronga kana ichiisa chigadzirwa pamusika uye kana zvisiri. Ichi chigadzirwa, kunze kwekufarirwa nevatengi, hachiwanzo kusvika panguva yakakodzera uye, iri zvakare basa raIve. Rimwe zuva mushure mekutaura kukuru kwaApple, Jony Ive akapa hurukuro kune Iyo Washingston Post, kutaura nezve nyika yeApple.
Mumashoko aIve kune pepanhau:
Bfupa rega rega mumuviri wangu rinondiudza kuti izvi zvakakosha. Ndiri kufarira kwazvo wachi, nekuti ini ndinoiona seyakakura mutsauko muhupenyu hwevanhu uye chaizvo kugona kwavo kushanda.
Nenzira iyi, Jony Ive anotaura sechinhu chemukati chekugona kweiyo wachi kuponesa hupenyu. Mazuva ese, anotambira tsamba kubva kuvashandisi achivatenda nekuda kwehunyanzvi hwekugadzira hwakavatendera kuponesa hupenyu hwavo.. Vashandisi vanokoshesa kuonekwa kwematambudziko emoyo apfuura, pamwe nekuvabvumidza kuti vakurukure nekukurumidza nezvinokurumidza
Iyo itsva Apple Watch Iyo ine mamwe ma sensors kutora chaiyo chaiyo kudzora kwezviratidzo zvedu zvakakosha. Nemapoipi epombi anogara aripo kumashure kweiyo wachi uye, nyowani kuChikamu 4, ikozvino zvakare pamusoro pekorona yewatch. Uyewo, korona iyi inosanganisa sensor yekuita ma electrocardiograms, zvichitevera kugamuchirwa neUS hutano system.
Asi nhau dzeChikamu 4 hadzigumira ipapo. Ma sensors matsva anotendera zivisa munhu akapfeka wachi kuitira kudonha. Uye zvakare, muWOSOS isu tine mukana weku seta kudzidzira kuti utange uye umire otomatiki, painotsvaga mafambiro.
Apple Watch 4 mirairo yakatanga musi wa14 uye zvikamu zvekutanga zvinotarisirwa kugamuchirwa musi waGunyana 21.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Iyo Apple Watch Series 4 inogona kunge iri "shanduko" maererano naJony Ive